कलंकीमा खुल्यो दृष्टि आँखा केन्द्र, ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क परीक्षण
बैशाख १५, २०७४ शुक्रवार २०:२२:०० प्रकाशित
काठमाडौँ- दृष्टि आँखा केन्द्रले कलंकीमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ। शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले आँखा केन्द्रको उद्घाटन गरे। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख डा. भाइराजा श्रेष्ठले प्रविधियुक्त अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीय आँखा स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रुपमा उपल्बध गराउने उद्देश्यले केन्द्रको स्थापना गरिएको बताए। उनले भने, 'सबैका लागि दृष्टि सधैँका लागि दृष्टि भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सबैको सहज पहुँच पुग्नेगरी सर्वसुलभ तरिकाले आधुनिक र स्तरीय उपचार प्रदान गरिनेछ।'
२०७० असोज २८ गते झापाको बिर्तामोडमा स्थापना भएको मेची दृष्टि आँखा अस्पतालले वीरगञ्ज, कलैया, काठमाडौँको जमल र चाबहिलपछि कलंकीमा सेवा विस्तार गरेको हो। कलंकीस्थित आँखा केन्द्रमा शल्यक्रियापछि हुन सक्ने इन्फेक्सनलाई न्यूनीकरण गर्न अपरेसन कक्षलाई भिनाइल फ्लोरिङ गरी हेपा फिल्टर राखी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाएको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए।
केन्द्रमा बिना इन्जेक्सन अत्याधुनिक तरिकाले मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गरिने केन्द्रका महाप्रबन्धक अजितकुमार ठाकुरले जनाए। डा. सबिता पालिखेले अमेरीकी प्रविधि भिटिएस सफ्टवेरबाट नेपालमा पहिलोपटक 'अल्छी आँखा'को उपचार गरिएको बताउँदै आफूहरुले सधैँ नयाँ प्रविधिमा जोडदिने बताइन्। केन्द्रले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क आँखा परीक्षण सेवा दिने बताएको छ।